Xiisad u dhaxeysa Galmudug iyo Ahlusuna oo saaka ka taagan deegaanka Mareergur – dulmidiid
August 23, 2017 Warka No comments
Xiisad u dhaxeysa Galmudug iyo Ahlusuna oo saaka ka taagan deegaanka Mareergur
Xiisad u dhaxeysa Maamulka Galmudug iyo Ahlusuna ayaa saaka ka taagan deegaanka Mareergur ee gobolka Galgaduud, kaddib markii saaka deegaankaas ay gudaha u galeen ciidamo ka tirsan maamulka Galmudug.
Sida ay sheegayaan wararka ciidamada gudaha u galay Mareergur ayaa ka soo ruuqaansaday degmada Cadaado oo xarun KMG u ah Maamulka Galmudug.
Wariyeyaasha ayaa soo sheegaya in saaka aroortii rasaas kooban laga maqlay deegaanka Mareergur oo qiyaastii 30KM u jirta Dhuusa Mareeb, waxaana isaga baxay ciidamadii Ahlusuna ee ku sugnaa deegaankaas.
Dhaq dhaqaaqyo ciidan ayaa la soo sheegayaa inuu ka socdo degmada Dhuusa Mareeb oo xarun u ah Ahlusuna, lama oga xiisadan sida ay saameynta ugu yeelan karto wada hadalada u socda Galmudug iyo Ahlusuna.
Xiisada saaka ka taagan deegaanka Mareergur ayaa ku soo beegmeysa, iyadoo maalmihii la soo dhaafay dagaalo ka dhacayeen degmada Xeraale, kaasoo u dhaxeeyay maleeshiyo deegaanka ah iyo Ciidamada Ahlusuna.
Dhinaca kale Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Galmudug ayaa ku eedeeyay Madaxweyne Xaaf inuu wado abaabul dagaal, isla markaana doonayo inuu duulaan ku qaado Dhuusa Mareeb, isagoo sheegay in maalmihii la soo dhaafay ciidamo lagu diyaarinayay Cadaado.
Tan iyo markii sanadkii 2015 degmada Cadaado lagu dhisay Maamulka Galmudug ayaa caqabadaha uu maamulkan wajahayay waxaa uu uga imaanayay dhanka Ahlusuna oo gacanta ku heysa inta badan deegaanada Galgaduud.